I-North Burien Nest - I-Airbnb
I-North Burien Nest
ESeattle, Washington, United States
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguMarie
Eli ligumbi lokulala elikhulu kunye negumbi lokuhlambela eliyi-queen. Ukungena kwakho kuza kuvela kwindawo ekhuselekileyo, yabucala yokupaka emva kwegeyithi etshixwayo enebhokisi enesitshixo nendawo yokungena ekude. Ukufikelela kwigumbi lakho lokulala/igumbi lokuhlambela kusetyenziswa umnyango owahlukileyo onenkqubo yokungena engenazitshixo. Kwakhona uza kukwazi ukusebenzisa indawo ephandle enetafile yaseverandeni, izitulo, indawo yokoja inyama eyojiweyo nomngxuma womlilo.
Igumbi lokulala/indawo yokuhlambela ipholile kwaye itofotofo kubantu abadala ababini. Njengoko iifoto zibonisa, le yindawo encinci ngoko nceda uqaphele oko xa uyibhukisha. Indawo yokupaka ekhuselekileyo iza kuthatha iimoto ezininzi kunye neenqwelo zokuqhuba lula. Ukuze ukhuseleke ngakumbi, ungangena kwiindawo zangaphakathi zegeyithi xa sele upakiwe. Indawo yokubasa neyeveranda ivaliwe ukuze uyisebenzise ngendlela ekhethekileyo, nangona ndingangena kule ndawo kancinci ukuze ndifumane isixhobo sam ngexesha lokuhlala kwakho.
Le ndawo ikude ngeenyawo kangangemizuzu eyi-5 ukusuka kwivenkile ethengisa izinto ezikhuselekileyo, kuquka indawo ethengisa amayeza, kunye nenkonzo yebhasi eya eSeattle, kwisikhululo seenqwelo-moya nezinye iindawo. Iindawo ezikufutshane zethu zithi cwaka kwaye zipholile kodwa zikwindawo enye ukuze kufikelelwe kwi-Puget Sound enkulu nayo yonke into ekhoyo kuyo. Xa usendleleni eya kwi-Safeway kukho iipaki ezimbini ezincinci zepokotho ezineendlela zokuhamba, umkhondo obalekayo kunye nezixhobo zokudlala zabantwana. IDowntown Burien inomtsalane kwaye ikhetheke. Khangela ilinki ekwi-intanethi yekhalenda yamatheko aseSixeko saseBurien ukuze ucebe izinto zokonwaba ngexesha lokutyelela kwakho.
I live just south of Seattle and enjoy traveling to new and interesting places. I also look forward to hosting visitors who want to enjoy our beautiful Pacific Northwest or need a place to land during a temporary work assignment.
Ndihlala kuloo ndlu ibe ndiza kube ndikhona ngexesha lokuhlala kwakho. Ndiza kukunika inkcazelo yokuqhagamshelana nawe xa ufikile ukuze sikwazi ukuhoya naziphi na iimfuno okanye izinto ezikuxhalabisayo ngendawo yokuhlala. Kungenjalo, uya kushiywa kwizixhobo zakho.
Ndihlala kuloo ndlu ibe ndiza kube ndikhona ngexesha lokuhlala kwakho. Ndiza kukunika inkcazelo yokuqhagamshelana nawe xa ufikile ukuze sikwazi ukuhoya naziphi na iimfuno okanye iz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Seattle